AbakwaHangzhou Jiande Enterprise babize ngokuphuthumayo abasebenzi abangaphezu kwekhulu, baphindaphinda umholo wabo kathathu ukukhuthaza isikhathi esengeziwe sokwenza imaski! Ngokuqhamuka kwepneumonia entsha ye-coronavirus eWuhan, ukukhiqizwa nokunikezwa kwamamaski sekuyisihloko somphakathi. Njengebhizinisi elihamba phambili ku-t ...
Ntambama ngoJanuwari 27, uZhou Jiangyong, oyilungu leKomidi eliPhezulu leProvince Party Committee kanye noNobhala weKomidi lePhathi likaMasipala waseHangzhou, waya kwaChaomei Daily Chemical Co, Ltd. (umkhiqizi womkhiqizo wokuvikela ubhubhane) ukuyophenya. Ugcizelele ukuthi i ...
Njengamanje, impi yezwe lonke yokulwa nenyumoniya ebangelwa i-coronavirus yenoveli isiqalile. Njenge "ndlela yokuqala yokuvikela" yokuvikela inhlanzeko yomuntu siqu, kubaluleke kakhulu ukugqoka izifihla-buso ezihlangabezana namazinga okuvikela ubhadane. Kusuka ku-N95, i-KN95 kuya kumaski wokuhlinzwa wezokwelapha, i-p ejwayelekile ...